Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 10)
Ma ogtahay inaad dhaqso u joojin karto Aqoonsiga Taabashada iyo Aqoonsiga Aqoonsiga. In Actualidad iPhone waxaan ku baraynaa sida ugu fudud.
IKEA waxay noqoneysaa mid Apple ka badan sidii hore
IKEA waxay kor u qaadeysaa saldhigyadeeda lacag bixinta wirelesska ee qaabka dhabta ah ee Apple iyadoo lagu dhawaaqayo iPhone 8, 8 Plus iyo X cusub
Tani waa sida kormeeraha wadnaha cusub ee watchOS 4 uu u shaqeeyo
watchOS 4 waxay kudareysaa howl kormeer xaddiga garaaca wadnaha ah oo hagaajin doona jimicsigeenna iyo caafimaadkeenna
Taxanaha Apple Watch 3 wuxuu la jaan qaadayaa wax soo saarka qeybta saddexaad ee lacag la'aanta wireless-ka
Qalabyo kala duwan ayaa la tijaabiyey si ay fiilo la’aan ugu soo dallacaan Apple Watch Series 3 qaarna la ogaaday inay is waafajin karaan.
Juuk Vitero, waa suunka ugu dagaal badan Apple Watch-kaaga
Juuk wuxuu soo bandhigayaa ururinta cusub ee Vitero oo ay dhiirrigelisay gawaarida tartanka iyo qaabab isboorti iyo dagaal badan.
Sida looga socdo macruufka 11 GM ilaa qaabka rasmiga ah habka ugu fudud
Shaki ayaa soo baxaya isla marka aan tagno iOS 11 GM, sidee baan uga bixi karaa iOS 11 GM ilaa nooca rasmiga ah? Waxaan ku tusineynaa sida aad wax u qaban karto.
Sida loo joojiyo otoplay-ka fiidiyowyada iOS 11 App Store
Maqaalkan waxaan ku tusineynaa sida aad u joojin karto si toos ah fiidiyowyada fiidiyowyada ku jira iOS 11 App Store.
No batari la macruufka 11? Tabaha lagu hagaajinayo ismaamulka
Sidaas awgeed waxaan ku siin doonnaa talooyin aad u habboon oo aad ku sarreyn kartid waxqabadka batteriga ee iPhone-kaaga oo leh iOS 11.
IOS 11 waxay bedeshaa hawlgalka WiFi iyo Bluetooth
Apple waxay badashay habdhaqanka furayaasha WiFi iyo Bluetooth ee iOS 11, waanan kuu sharixi doonaa sida ay hada u shaqeeyaan
macruufka 11 iyo watchOS 4 oo hadda diyaar ah oo laga soo dejisan karo
iOS 11 iyo watchos 4 ayaa hada la heli karaa si loogu rakibo dhamaan aaladaha la jaan qaada waxaana kuu sheegeynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u cusbooneysiiso
Waxa la sameeyo ka hor inta aan la cusbooneysiinin iOS 11
Ka hor intaadan cusbooneysiinin iOS 11 waa inaad ku qabataa hawlo taxane ah iPhone-kaaga ama iPad-kaaga. Baro iyaga oo ku raaxee warkii iOS 11 khatar la'aan.
Nike waxay soo bandhigeysaa maaliyadaha cusub ee NBA ee leh NFC chip la jaanqaadi kara iPhone-ka
Nike waxay cusbooneysiineysaa xirmooyinka NBA waxayna ku daraysaa qalab NFC ah oo aan ku isticmaali karno iPhone-keena mahadnaqa cusub ee iOS 11.
Apple wuxuu joojiyaa iibinta suunka 'Pride Edition', laakiin wali waad heli kartaa
Apple ayaa joojisay iibinta suunka Pride Edition, seddex bilood ka dib markii ay iibisay.
Baqbaqaaq Mambo, falanqaynta diyaarad yar oo aan duuliye lahayn oo lala yaabo
Baqbaqaaqda Mambo waa diyaarad yar oo aan duuliye lahayn oo ka soo harta inta kale si ay ugu fududaato la tacaalkeeda iyo xasilloonideeda, oo ay ku jiraan foosto iyo tweezers sidii siyaado.
Bakhaarka Chicago Apple ayaa furmi doona Oktoobar 20
Furitaanka dukaanka Apple ee Chicago oo aan aragnay in muddo ah dhisme ayaa durba leh taariikh la xaqiijiyay, on ...
Aqoonsiga Face-ka ayaa shaqeynaya xitaa haddii aad xirto muraayadaha indhaha
Muuqaalka cusub ee Apple ID aqoonsiga wajiga ayaa kula shaqeyn doona muraayadaha indhaha ee suuqa.
Dib u eegista Aukey's PowerBank, waa batari awood badan oo 20000mAH ah
Waxaan tijaabinay Aukey Powerbank oo leh awood dhan 20000mah, waa bangi kaamil ah oo aan ku buuxin karno xarigeena danabka
Kani waa aaladaha cusub ee Mophie ee amraya wireless-ka ee iPhone 8, 8 Plus iyo iPhone X
Hadda ku-dallaca induction waa xaqiiqo ka jirta iPhone-ka, soosaarayaasha ayaa bilaabay inay billaabaan xeedho cusub oo noocan ah oo loogu talagalay iPhone-ka.
X-Doria wuxuu na tusayaa kiisaskeeda cusub ee iska caabinta ee iPhone 8 iyo iPhone X
Adduunyada qalabka waxaan ka helnaa waxyaabo badan oo loogu talagalay iPhone-ka iyo sida muuqata moodooyinka cusub ee la soo bandhigay ...
Haddii aad raadineyso afhayeen raqiis ah oo leh cod awood leh, Aukey SK-S1 waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan, naqshad wanaagsan oo leh labo darawal oo 8W 2000mAh ah.
Kiisaska iPhone 7 iyo 7 Plus waxay la jaan qaadayaan kuwa iPhone 8 iyo 8 Plus, markaa waan cusbooneysiin karnaa iPhone dhibaato la'aan kiisaska haynta kiisaska
Disney ma bixin doonto filimkeeda 4k iyada oo loo marayo iTunes
Filimada Disney, oo ay ku jiraan kuwa Marvel iyo Star Wars, laguma heli doono tayada 4k iyada oo loo marayo iTunes
Miyaad seegtay qodobka muhiimka ah? Waa tan 12 daqiiqo oo kooban
12 daqiiqo oo kooban oo muujinaya ugu muhiimsan wixii ka dhacay muhiimada ugu dambeysay
Apple wuxuu ansixiyay shan bilyan oo wareeg ah
Apple ayaa kaliya ku dhawaaqday inay bilowday inay bixiso wareegyo kale oo bond ah oo wadartoodu tahay $ XNUMX bilyan si loo bixiyo faa'iidooyinka iyo dib u soo celinta.
iPhone X: qeexitaannada, helitaanka iyo qiimaha
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iPhone X waxaad ka heli doontaa qodobkaan: qeexitaannada, qiimaha, helitaanka, midabada ...
AirPower: saldhigga lacag-bixinta wireless-ka ah ee aynaan arki doonin illaa 2018
Apple waxay ku dhawaaqday qalab cusub oo ay ku soo dallacayso badeecooyinka lagu soo bandhigay bartamaha Sebtember: AirPower, oo ah saldhig amar ku bixinaysa.
Hal shay oo dheeri ah: Apple ugu dambeyntii wuxuu soo bandhigayaa iPhone X
Waxay la jirtay "hal shey oo kale". Tim Cook ayaa ugu dambeyntii soo saaray iPhone X, iPhone-ka oo lagu xuso sannad-guurada XNUMXaad ee iPhone.
IPhone wuxuu yeelan doonaa koritaan ballaaran sanadka 2018
Iibinta Apple ee qeybta iPhone-ka ayaa si weyn kor ugu kici doonta sanadka soo socda, iyada oo ay ugu wacan tahay soo bandhigida moodooyinka cusub ee taleefanka.
TIME wuxuu daabacaa sawirro taxane ah oo lala qaado kamaradda iPhone-ka
Kaamiradda iPhone-ka ayaa hadda noqotay xiddig sawirro taxane ah lagu daabacay majaladda TIME. Sirtiisa: fudeydkiisa
Sida loo kiciyo shaqada AirDrop ee iOS 11 ee iPhone iyo iPad
Ku shaqeynta muujinta Xarunta Xakamaynta AirDrop ee leh iOS 11 waa geedi socod aad u fudud. Waxaan sharaxeynaa sida loo sameeyo.
Apple ma awoodo inuu qariyo sir, muxuu u maleyn lahaa Steve Jobs?
Ka soo horjeedda wax kasta oo u muuqda in lagu soo koobay shirkadda Cupertino, Apple miyuu yahay hermetic sida naloo horseeday inaan rumaysanno?
Kiisaskii ugu horreeyay ee loogu talagalay iPhone X waxay bilaabeen in la bilaabo
Waxaan kaliya u jirnaa 48 saacadood soo bandhigidda iPhone X, illaa iyo hadda loo yaqaan iPhone 8, cusub ...
Tani waa sida loo yaqaan 'iOS 11 Status Bar' oo u eg iPhone X oo laga helay daadinta
Runtii ma aanan ogeyn sida Apple ay u maareynayso inay ka dhigto heerka xaaladda ee daabacaadda iPhone u ekaato, laakiin horumariyehan ayaa ku guuleystay inuu muujiyo.
Apple waxay dib u cusbooneysiin doontaa AirPods qodobka soo socda
Ragga ka socda Cupertino sidoo kale waxay ka shaqeeyeen inay soo bandhigaan casriyeyn aad u yar oo dhanka bilicda ah oo ku saabsan AirPods.
Xarunta cagaaran ee GreenIQ, ku xakameyso waraabka iPhone-kaaga
Saldhigga GreenIQ Smart Garden ayaan kuu oggolaan doonin oo keliya inaad xakameyso waraabka ilaa 16 aag laakiin sidoo kale wuxuu keydin doonaa biyaha.
Si fudud u rariso AirPods-kaaga iyo iPhone-kaaga si wadajir ah kiiskan
Ragga Pebble waxay bilaabeen olole cusub oo Kickstarter ah si ay u raadsadaan maalgelin si ay u bilaabaan kiis batari ah oo sidoo kale ku eedeeya AirPods
IOS 11 waxay ku dareysaa hab deg deg ah oo lagu keydiyo xogta iyo batteriga
Apple way inaga fakartay oo waxay ku dartay iOS 11 dariiqa xiisaha leh ee lagu badbaadin karo sida ugu macquulsan ee xogta mobilada, iyadoo keydkeeda batteriga ay keensato.
Apple waxay dayactir ku sameysaa aaladaha isticmaaleyaasha ay waxyeeleeysay Duufaanta Harvey lacag la’aan
Wiilasha Cupertino ayaa bilaabay hagaajinta burburka aaladaha Apple ee adeegsadayaasha ay saameysay duufaanta Harvey
Apple's Beats Studio3 waa sameecadaha dhagaha ee wireless-ka wata ee W1 chip
Apple waxay ballaarisay tirada sameecadaha dhagaha ee wireless-ka ee shirkadda Beats ee ay ku bixiso boggeeda internetka.
Philips wuxuu soo bandhigayaa qalab cusub oo loogu talagalay kala duwanaanta iftiinka Hue
Ragga ku jira Philips waxay ballaarinayaan kala duwanaanta nalalka casriga ah ee 'Hue smart' oo wata qalab cusub si aan u helno xulashooyin nal caqli badan.
Kaaliyaha casriga ah ee Amazon, Alexa, wuxuu imaan doonaa Bragi Dash bisha Oktoobar
Jarmalkii ka yimid Bragi, ayaa ku dhawaaqay in cusbooneysiinta soo socota ee Dash iyo Dash Pro ay la jaan qaadi doonto Amazon Alexa
Tado waxay soo bandhigaysaa Kaaliyeheeda Cimilada casriga ah
tadoº ayaa soo bandhigtay Kaaliyeheeda Cimilada casriga ah ee madaxdeeda heerkulbeegga iyo heerkulbeeggeeda smart, oo la jaan qaadaya HomeKit
Dhibaato xagga dhawaaqa ah malahan iPhone-ka? Haddii la maqlo aad u hooseeya, ma dhawaaqayo, ama si fiican uma dhawaaqeyso, waxaan ku tusi doonaa sida loo hagaajiyo iPhone-kaaga haddii aad la kulanto guul darrooyinkan
AirPods waxay xukumaan Suuqa Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Telefoonada Inkasta oo Kordhinta Tartanka
AirPods waxay noqdeen, uguyaraan Mareykanka, aaladaha wireless-ka ugu iibinta badan ee noocan ah, oo leh 85% iibka
SanDisk iXpand Base waxay noo ogolaaneysaa inaan lacag ka qaadno iPhone-ka inta aan sameyneyno keyd
Ragga SanDisk jooga ayaa cusbooneysiiyay khadkooda wax soo saar waxayna soo bandhigeen iXpand Base, oo ah qalab lagu soo dallaco isla markaana lagu taageero iPhone.
Netatmo waxay ku dhawaaqeysaa warkeeda HomeKit ee IFA 2017
Netatmo waxay soo bandhigtay qalab cusub oo guriga ku shaqeeya oo ku shaqeeya HomeKit waxayna ku dhawaaqday cusbooneysiin ku saabsan kamaradeeda si ay ula jaan qaado.
Nest wuxuu soo bandhigayaa Thermostat E cusub, oo leh qiimo hoose iyo astaamo waxoogaa ka fiican qaabkii hore
Markii aan ka hadlayno Nest, heerkulbeegga ugu horreeya ee caqliga leh oo umuuqday inuu ka imanayo mustaqbalka ayaa maskaxda ku haya oo ...
Sannadka dambe waxaan arki karnaa iPhone 6,4-inji ah oo leh shaashadda OLED
Waxaan wali sugeynaa taariikhda rasmiga ah ee muhiimka ah ee bisha Sebtember iyo warbixinnada qaar ee ka imanaya warshadaha ku lug leh ...
Apple waxay ku deeqday $ 2 milyan halka isticmaaleyaashuna mid kale ka helaan iTunes-ka dhibbanayaasha Harvey
Duufaanta Harvey shaki la’aan waxay ku tahay cabsi badan gobolka Texas. Masuuliyiintu ma ...
Neato Botvac D7 Iskuxira, aaladda ugu horumarsan robot nadiifinta
Neato waxay soo bandhigtay robotkeedii ugu dambeeyay ee nadiifinta, D2017 oo kuxiran, IFA 7, oo ku faaneysa khariidadaha nadiifinta, marinka laser iyo isku xirnaanta WiFi
Xiaomi waxay dhigeysaa soo bandhigitaankeeda Mi Mix 2 maalin ka hor intaan la fileynin Apple
Shirkadaha oo dhami way ka warqabaan waxa intiisa kale ay qabato iyo in ka badan marka ay timaado bandhigyada cusub ...
NYPD inay qoddo taleefannadooda duugga ah ee Nokia oo loogu talagalay iPhone
Waxay umuuqataa wax qariib ah laakiin waa run gebi ahaanba in Booliska New York (NYPD) uu u xilsaaray mid kasta oo ka mid ah wakiilladooda ...
Apple wuxuu bilaabay inuu la wareego taageerada macaamiisha Beddit
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabayaan inay na siiyaan taageero farsamo oo ku saabsan Beddit, oo ka mid ah aaladaha ugu fiican ee lagu raadsado riyadeena.
Sawirro ayaa laga soo daadiyay shaashadda iPhone 7s
Laga soo bilaabo shabakada bulshada ee Weibo, sawirradii ugu horreeyay ee waxa uu noqon karo guddiga iPhone 7s ayaa la sii daayay, oo aad ugu eg kii ka horreeyay.
Apple Lexus ayaa mar kale lagu arkay jidadka iyo nidaam cusub oo LIDAR ah
Uma baahnid inaad aad ugu fiirsato si aad u aragto in dareemayaasha cusub ee ku dhejinaya Lexus SUVs saqafka ay yihiin ...
Kordhinta ku-shubista ee iPhone 8 waxay ku koobnaan doontaa 7,5 watts
Sida lagu soo wariyay warbaahinta Japan Macotakara, soo-saarista soo-saarista ee iPhone 8 ayaa ka shaqeyn doonta kala bar waxqabadka heerka Qi
Meel ku keydi iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga mahadnaqa iOS 11
IOS 11 ayaa naga badbaadin doonta meel ka mid ah qalabkayaga iyada oo ay ugu wacan tahay ikhtiyaarrada cusub ee lagu dhex daray nidaamka naga caawin doona inaan sidaas yeelno
Apple wuxuu ballaariyaa midabka midabka Beats Solo3 Wireless
Ragga ka socda Cupertino waxay ballaariyeen tirada midabada Beats Solo 2 Wireless laga heli karo
Kani ma yahay Motherboard-ka cusub ee iPhone 7s Plus?
Intii lagu jiray saacadihii ugu dambeeyay xaqiijinta rasmiga ah ee qodobka muhiimka ah waxaa loo samayn karaa 12-ka soo socda ee ...
AirPods waxaa laga heli karaa dukaamada-saddexaad iyadoo la keenayo wax ka yar dukaanka Apple
Waxaan horeyba uga dignay maalmo kahor in saamiga Apple AirPods uu bilaabay inuu caadi noqdo tanna ...
Waxaan tijaabinay iOS 11 Beta 7 oo kuwani waa warka oo dhan
Waxaan tijaabinay macruufka 11 Beta 7 waxaanan kuu sheegi doonaa waxa ay yihiin dhammaan wararka u yimid in lagu sii joogo nooca iOS ah, nala baro iyaga.
Apple wuxuu yareynayaa waqtiga rarka ee AirPods illaa 2-3 toddobaad
Laba toddobaad ka dib markii la yareeyay waqtiga rarka ee AirPods, raggii ka socday Cupertino ayaa mar kale yaraaday, hadda waxay yihiin toddobaadyo 2-3.
Sida loo joojiyo AutoPlay ee iOS 11 App Store
Waxaan arki doonnaa sida loo joojiyo AutoPlay ee iOS 11 App Store, shaqeynta noo oggolaaneysa inaan daawanno fiidiyowyo macluumaad ah oo ku saabsan barnaamijyada.
Hal abuur leh, dhawaaq iyo iftiin qiimo aad u xiiso badan
Hal abuurka ayaa hada bilaabay Halo ku hadla kaas oo isku daraya dhawaq wanaagsan iyo nal toos ah oo muusig leh qiimo aad u jaban.
IPhone 7 wali waa taleefanka casriga ee ugu caansan suuqa
Sida laga soo xigtay Istaraatiijiyada Istaraatiijiga ah, iPhone 7 oo ay weheliso nooca loo yaqaan 'Plus' ayaa wali ah boqorka suuqa xagga iibka.
OS Power Box, ka qaado iPhone-kaaga, iPad-ka, Apple Watch iyo xitaa MacBook-gaaga
Enblue wuxuu na siinayaa saldhig lacag cusub oo loogu talagalay dhammaan aaladahayaga oo ay ka mid yihiin laptop-kayada adoo adeegsanaya USB-C, isku xirayaasha danabka iyo Apple Watch
iFixit wuxuu bilaabayaa shaashadda iPhone 7 iyo 7 Plus iyo xirmooyinka dayactirka batteriga
Ragga jooga iFixit waxay bilaabeen xirmooyin dayactir oo kala duwan si ay u beddelaan baytariga, shaashadda ama walxaha yaryar ee iPhone 7 iyo 7 Plus
Waxyaabaha 3, maareeyaha hawsha oo qurux badan laakiin aan dhammaystirnayn
Koodhka Dhaqanku wuxuu nagu qanacsan yahay nooca saddexaad ee Waxyaabaha, kaas oo raacaya mabda 'u ahmiyadda koowaad u leh dhinaca muuqaalka oo iska iloobaya shaqooyinka muhiimka ah
Sidee looga saaraa jahwareerka sawir lala qaaday qaabka sawirka iPhone-ka ee iOS 11
Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee ay ku leedahay iPhone 7 Plus waa Sawirka Sawirka. Qaabkan isticmaalaha ...
HomePod wuxuu ku imaan doonaa daadinta bisha Diseembar, helitaanka AirPods waa lagu celin doonaa
Qeybtii ugu dambeysay waxaan ku arki karnay warar fara badan, warar caan ah, dhowr bilood ka hor ...
Websaydhka xisaabtaada Apple wuxuu helayaa dhibco ammaan oo wanaagsan
Websaydha maamusha koontadaada Apple ayaa helaysa dhibco wanaagsan xaga amaanka sida ku cad daraasada ay sameysay Dashlane
Tani waa sida codsiyada ugu caansan ay u eegi doonaan iPhone 8
Aynu si dhakhso leh u eegno sida barnaamijyada ugu muhiimsan ee macruufka ay u ekaan doonaan saamigan shaashadda cusub ee gaarka ah.
Koogeek kormeeraha cadaadiska dhiigga ee iPhone, ku kormeer caafimaadkaaga qiimo wanaagsan
Waxaan falanqeynay kormeerka cadaadiska dhiigga Koogeek, oo ay caddeysay FDA iyo codsi iOS ah oo la jaan qaadaya barnaamijka Apple Health.
Swarm waa la cusbooneysiiyay wuxuu noqonayaa xusuusqorkeena meelaha aan booqano
Swarm waa la cusbooneysiiyay taas oo sahleysa in la badbaadiyo dhammaan meelaha aan booqannay si aan hadhow ugu xusuusanno iyaga oo faahfaahsan.
IKEA waxay cusbooneysiisaa nalkeeda casriga si ay ugu taageeraan HomeKit [Cusboonaysiin: Weli]
Nalalka casriga ah ee IKEA, TRADFRI, waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo taageerada AppleK HomeKit, marka hadda waxaan ku xakameyn karnaa Siri.
Muuqaalka Japan, oo leh dhibaatooyin la kulmaya isbeddelka OLED
Bandhigga Japan wuxuu u baahan yahay maal-galiye dibadeed si uu awood ugu yeesho inuu wajaho isbeddelka wax-soo-saarkiisa ee LCD-da illaa OLED, taas oo ay ugu wacan tahay dalabka shirkadda Apple.
Dhiqlaha iyo xalalka yimaada Beta 5 ee iOS 11
IOS 11 Beta waxaa weheliya xalal yar yar iyo khaladaad kale oo badan oo isoo aruursanaya, Apple wali shaqo badan ayaa u taala.
Patent cusub oo u rogi lahaa iPhone qalab caafimaad
Ruqsadaha cusub ee Apple ee la xiriira Caafimaadka iyo Daawada waxay adeegsadaan dareemayaasha hore ee iPhone si ay u sameeyaan cabbiro caafimaad.
Apple wuxuu ka saarayaa "iCloud Messages" muuqaalka iOS 11 Beta 5
Farriimaha ku jira iCloud ayaa ah muuqaal laga saaray Beta shanaad ee iOS 11 iyo Apple ayaa na siisay sharraxaad yar.
Adeegga farriinta ee Youtube ayaa durba la bilaabay
Google waxay rabtaa inaan waxan oo dhan ka qabanno adeega fariinteeda ee kuxiran YouTube, waxayna bilawday in aduunka oo dhan la geeyo.
LEDVANCE waxay ku dhawaaqeysaa nalalka casriga ah iyadoon loo baahneyn xarun
Waxaa sii kordheysa caadi ahaan in la helo aalado casri ah oo noo ogolaanaya inaan si toos ah uga xakameyno gurigeenna taleefanka casriga ah iyo ...
Dhirta Samsung, oo leh awood buuxda Apple
Samsung waxay qorsheyneysaa inay ku shaqeyso awood buuxda oo ka bilaabaneysa bishaan toddobo khadadka wax soo saarka OLED ee loogu talagalay Apple.
Apple wuxuu bilaabay inuu ku iibiyo xirmada kaamerada RED RAVEN gaar ah ee Apple Store
Soosaarayaasha kaamirooyinka filimka xirfadleyda ah, RED, ayaa Apple siinaya mid gaar u ah inay ku iibiso RED RAVEN Dukaanka Apple.
Apple wuxuu horeyba u tijaabin lahaa muraayadaha dhabta ah ee Augmented Reality
Apple waxay horey u tijaabin laheyd laba nooc oo ah muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay, qaar madax banaan iyo kuwa kale oo u isticmaali lahaa iPhone shaashad
Beat Fever, ciyaar muusig oo ay horay u jirtay
Beat Fever waa ciyaar muusiko ah oo aan ku ciyaari karno heesaha ugu caansan uguna baashaal badan wadada.
Tani waa sida quruxda badan ee iPhone 7s ay u noqon karto sida ku cad demoigan xaday
Tani waa sida aan u haysanno waxa noqon kara muuqaalka ugu horreeya ee sida iPhone 7s u ekaan lahaa oo xaqiiqadu waxay tahay inay macno ahaan qurux badan tahay.
Cusboonaysiinta iPhone SE ma imaaneyso illaa horraanta 2018
Waxay u muuqataa in cusbooneysiinta muddada dheer ee iPhone SE ay tahay inay sugto illaa bilowga sanadka soo socda, sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay.
Helitaanka AirPods wuxuu hoos ugu dhacayaa usbuucyada 4
Kadib ku dhawaad ​​8 bilood suuqa, helitaanka AirPods wuxuu hoos ugu dhacay 4 usbuuc.
Sida fiidiyowyada dhaadheer looga soo diro WhatsApp oo aan loo jarin
Sidee looga soo diraa fiidiyowyada dhaadheer WhatsApp oo aan la jarin? Waxaan ku tusineynaa habka aad u soo dirto fiidiyowyo ka dheer inta WhatsApp noo oggol tahay.
Ma jeclaan lahayd iPhone 8 oo dhabarka hufan leh? Kani waa fikrad hufan oo iPhone 8 ah [Muuqaal]
Tani ma aha noocii ugu horreeyay ee iPhone ee aan u aragno fikrad la socota daaqad hufan oo ku ...
Waxay hagaajinaysaa iswaafajinta iPhone ee qalabka maqalka
Apple waxay ka shaqeyneysaa inay wanaajiso is waafajinta iPhone-ka ee qalabka maqalka ee maqalka loo isticmaalo.
Apple wuxuu u jajabiyaa Rock + Siri gaaban saddex xayeysiis
Dhowr maalmood ka hor gaaban The Rock wuxuu u yimid kanaalka Apple ee YouTube-ka isagoo adeegsanaya kaaliyaha Siri ee ...
Apple wuxuu ku dadaalayaa inuu kordhiyo wax soo saarka AirPods
Apple oo uu weheliyo Tim Cook hogaamiyaha ayaa sameynaya intii karaankooda ah si ay u kordhiyaan soo saarida dhagaha dhagaha ee wireless-ka ...
UV Derma, waa gargaar looga hortagayo khataraha aan loo baahnayn ee maqaarkaaga
UV Derma waa codsi heer sare ah oo lagu ogaanayo sida, intee iyo qaabkee ah inaan qorrax u gubno iyadoon maqaarka u bandhigin khataraha aan loo baahnayn
Natiijooyinka Q3 2017: Apple ayaa sii socota sii kordheysa iyo iPad-ka ayaa lala yaabay
Apple waxay ku dhawaaqeysaa xogteeda maaliyadeed rubacii seddexaad ee sanadka 2017 iyadoo la heysto tirooyin wanaagsan iyo koror lama filaan ah oo ku yimid iibka iPad.
Xuquuqda lahaanshaha muraayadaha dhabta ah ee Apple la kordhiyay
Apple wuxuu ka dambeeyaa patent u horseedi kara qalab cusub: muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay. Patent-ka ayaa dhowaan la shaaciyey
Xarunta xogta Athenry ee Irland ayaa dib u dhacday markale
Tanina waa markii ugu horraysay ee xaruntaan xogta ee Apple ay tahay inay ka dhisato Athenry dib loo dhigo,…
Waxaan isbarbar dhigeynaa Apple Pay iyo tartankiisa: Samsung iyo Android Pay
Waxaan dooneynaa inaan isbarbar dhig ku sameyno Apple Pay, Samsung Pay iyo Android Pay, oo ah saddexda bedel ee ugu adag lacagaha mobilada ee suuqa.
Tado Smart Hawada, ku xakamee qaboojiyahaaga iPhone-gaaga
Tado waxay na siisaa kontarool fog oo caqli-gal ah qaboojiyahayaga oo noo oggolaanaya inaan aasaasno qalab otomaatig ah iyo barnaamijyo shaqsiyeed
Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu fasaxi laheyd iPhone-kaaga 7-da tabaha kaa caawin doona inaad xasuus badan ku haysato iPhone-kaaga ama iPad-kaaga. Dhamaantood ma tijaabisay?
$ 2.000 bilyan ayaa ku kacaya Apple inay nabad la gasho Nokia
Qeyb ka mid ah heshiiska ay gaareen Apple iyo Nokia waxay na tuseysaa lacag dhan 2.000 bilyan oo doolar oo Apple ka siisay shirkadda finland
Faahfaahinta HomePod, afhayeenka Apple ayaa shaaca laga qaaday
Falanqaynta qalabka 'HomePod' wuxuu muujinayaa faahfaahin qaar ka mid ah afhayeenka mustaqbalka ee Apple ee imaan doona bisha Diseembar
Apple wuxuu bilaabaa tijaabinta kooxda 5G ee mashaariicdeeda
Tani waa mid ka mid ah wararkaas oo umuuqda kuwa "horumarsan" waqtiga kuwa aan aragno xitaa sida ...
Kadib khilaafkii Romba, Apple waxay sheegtay inaysan iibin doonin xogta ay soo ururisay HomePod
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino waxay sheeganeysaa inaysan marna ka ganacsan doonin xogta ay ka heli karto khariidaynta guryaha ay ku taal
Sida loo wareejiyo music in iPhone oo aan iTunes
Waxaan ku baraynaa sida loogu wareejiyo muusikadaada iPhone-ka adigoon isticmaalin iTunes, iyadoo kuwan kale lagu beddelayo si aad ugu dhejiso heesaha aad ugu jeceshahay mobiilkaaga Apple.
Waxay muujinayaan sida looga tirtiro akoonka iCloud qalabkeena adigoon galin lambarka sirta ah. Ma furi kartaa iPhone ama iPad?
Sida loo Joojiyo Cusboonaysiinta Maktabadda Sawirka ee iCloud
Maanta waxaan kuu sheegeynaa sida loo hakinayo cusbooneysiintaada iCloud Photo Library ee ku saabsan macruufka iyo Mac marka kaliya aad leedahay isku xirnaanta moobiilka
Roomba vacuum nadiifiye ayaa iibin doona qorshayaasha gurigeenna kuwa ugu badan ee iibiya
Shirkada ka dambeysa nadiifiye Romba, iRobot, waxay sheeganeysaa inay dhowaan rabto inay ka iibiso macluumaadka khariidadeynta guryaha dhinacyada saddexaad.
Xaraashka labaad ee Eddy Cue ee Charitybuzz wuxuu joogaa $ 26.000
Shalay, Luulyo 25, waqtiga kama dambaysta ah ee lagu qeexay guriga xaraashka Charitybuzz si loo ururiyo lacag loogu talagalay faa'iidada ...
Garsooruhu wuxuu kordhiyaa lacagta ay Apple ku bixinayso Jaamacadda Wisconsin. Laga soo bilaabo $ 234 ilaa $ 506 million
Wax walba waxay umuuqdaan inay khaldan yihiin wiilasha Cupertino markan waana taas kadib ...
Waxaan tijaabinay sameecadaha dhagaha ee 'Sudio Tre', waa ikhtiyaar wanaagsan oo loo yaqaan 'Bluetooth' oo aan ugu bixi karno ciyaaraha
Dib u eegida dhagaha dhagaha ee 'Sudio Tre', mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee dhageysiga muusikada inta lagu guda jiro isboortiga oo leh qaab ka soo horjeedka dhicitaan iyo iska caabin.
FreedomPop waxay u wareegtaa wicitaanada dhaqameed iyo 4G
FreedomPop waxay tagtaa wicitaanada caadiga ah iyo tayada 4G, marka lagu daro sicirka cusub, oo ka dhigaysa adeegiisa aasaasiga ah mid bilaash ah
IOS 11 ayaa noo oggolaan doonta inaan la wareegno xakamaynta isku xirka tooska ah ee WiFi
IOS 11 waxay ku dartay biiro si aan si toos ah u joojin karno isku xirka shabakada WiFi anagoon ilaawin erayga sirta ah
Internetka meelkasta oo aad joogtid adoo adeegsanaya TP-Link 4G router
Waxaan ku falanqeynay router MiFi TP-Link M7350 oo leh 4G isku xirnaan, ilaa 10 aaladood iyo labo band, oo xitaa aqbala microSD si loo keydiyo.
Koogeek Smart Plug Review. Qalabka korantada ku habboon ee HomeKit
Toddobaadkan waxaan fursad u leenahay inaan ku tijaabino fiilada smartK ee HomeKit, Smart Plug oo ka socota Koogeek. Shirkadan ayaa ...
Soo saarayaasha ayaa sugaya soo bandhigida iPhone 8
Waxaan joognaa meeshaas marka lagu daro adeegsadayaasha laftooda, soo saarayaasha ayaa sidoo kale sugaya inay arkaan ...
Trump ayaa ka dhigaya Apple inay kordhiso kharashaadka ololeynteeda
Trump wuxuu ahaa kacaan dhinac walba leh. Apple, waxay ula jeeday kordhinta kharashka ku baxa ololeynta Golaha Guurtida.
Apple wuxuu bilaabayaa xayeysiis gaaban oo leh Siri iyo Rock as protagonists
Apple ayaa soo saari doonta berri filimkeedii ugu horreeyay oo ay la socdaan Siri iyo Dwayne Johnson "The Rock" oo la yiraahdo The Rock X Siri: Dominate de Day.
Tani waa heerkulbeegga casriga ah ee ugu horreeya ee Microsoft ay maamusho Cortana
GLAS waa kuleylka casriga ee cusub ee Microsoft, kaasoo ay shirkadda fadhigeedu yahay Redmond ay rabto inay la istaagto Nest
Dib u eegista kamaradda Nest Cam IQ [VIDEO]
Waxaan falanqeyneynaa kamaradda amniga ee Nest Cam IQ, mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan qeybteeda leh aqoonsi wajiga iyo ogeysiisyo
Sidee kutiri kuteenku u saameeyaan aragtidayada ku saabsan alaabada Apple
Qalabka Apple ayaa aad ugu nugul daadinta iyo wararka xanta ah ee saameeya aragtida dadka isticmaala ay ka qabaan.
IOS 10.3.3 vs iOS 10.3.2: Xawaaraha iyo waxqabadka tijaabada
Isbarbardhigga xawaaraha u dhexeeya nooca ugu dambeeya ee macruufka ee ay sii daayeen Apple maalmo ka hor, iOS 10.3.3 iyo kii hore iOS 10.3.2
Batariyada baabuurta korontada ku shaqeeya waxay bartilmaameed u noqon doontaa Apple
Waxay u muuqataa in gaariga Apple uu wali yahay mawduuc soo noqnoqonaya Apple waana tan kadib ...
Codadka taleefannada loogu talagalay iPhone
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo soo dejiyo ringtones-ka iphone si bilaash ah ama aad u sameysato laxankaaga heesaha aad ugu jeceshahay.
Opera oo ku saabsan nolosha Steve Jobs ayaa furmaya Sabtidaan
Opera oo ku saleysan nolosha Steve Jobs ayaa sabtida soo socota ka furmaya magaalada Santa Fe (New Mexico), inkasta oo ay markaas aadi doonto dhulal kale.
Apple waxay ku soo laabatay inay ku siiso alaabada caafimaadka ee Nokia, oo hore loo odhan jiray Withings, dukaankeeda internetka
Shirkadda Finish-ka ah ee Nokia ayaa mar horeba ku bixisa dhammaan wax soo saarkeeda caafimaad iyada oo loo sii marayo websaydhka Apple ee Maraykanka iyo Kanada
Neato Botvac D3 wuu kuxiran yahay, nadiifiyaha nadiifinta aaladda nadiifinta robot-ka
Waxaan tijaabinay Neato Botvac D3 Vacuum robot ku xiran, oo ah aalad casri ah oo aan ka koontarooli karno iPhone-keena oo aan ku hogaamin karno leysarka.
Fasax xiiso leh oo looga waco xaaladaha degdegga ah ee ka yimaada iPhone-ka
patent-ka Apple-ka shatiyadiisu (patent Apple) marwalba waa mowduuc soo noqnoqonaya kiiskanna waxay ikhtiyaari u heleen ikhtiyaar ay ku wacaan
Dhammaan wixii ku saabsan Xarunta Xakamaynta ee iOS 11
Waxaan falanqeyneynaa mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee ugu weyn ee iOS 11 ee loogu talagalay iPhone iyo iPad: Xarunta Xakamaynta cusub oo leh xulashooyinka qaabeynta
'Filmer's Kit' xirmada siyaada ah ee Olloclip ee loogu talagalay iPhone 7
Inbadan oo naga mid ah ayaa inbadan garanayay astaanta Olloclip, waana in sanado badan ay soosaaraysay muraayadaha indhaha ...
IOS 11 waxay ka tagaysaa dareemo fiican iPad-ka marka loo eego iPhone-ka
Shaki ayaa lagu beeray waxqabadka nooc cusub oo ku saabsan labada iPhone iyo iPad ... sidee ayuu iOS 11 uga shaqeeyaa iPad-ka?
Apple waa inuu go'aansadaa halka uu dhigayo Aqoonsiga Taabashada ee iPhone 8 waqti la'aan
IPhone 8-ku wuxuu ku dhow yahay koonaha Apple waa inay go aansato halka ay dhigeyso Aqoonsiga Taabashada ee caanka ku ah shirkada dhexdeeda.
Australia sidoo kale waxay rabtaa inay ka hortagto soo saarayaasha inay sirta nidaamyadooda
Australia, oo ku taal dhulka kangaroos, waxay sidoo kale dooneysaa Apple inay joojiso sirta nidaamka qalliinka iyo xitaa farriimaha.
Xadka Mareykanka waxay ka eegi karaan iPhone-kaaga laakiin ma baari karaan iCloud-kaaga
Haa, xadka Mareykanka waxaa laga yaabaa inay ku weydiiyaan inaad furto iPhone-kaaga laakiin ma awoodi doonaan inay isku dayaan inay galaan xogtaada iCloud.
Falanqeyn: Insta360 Nano, kaamirada lagu duubayo sawirada iyo 360 fiidyow oo aad la socoto iPhone-kaaga
Kaamirada Insta360 Nano waa yar tahay, is haysta, oo aad loo qaadi karo. Ka sameynta fiidiyowyo 360-digrii ah iphone-kaaga waligiis ma fududaan. Maanta waan falanqeyneynaa.
Facebook wuxuu isku diyaariyaa O 200 Oculus oo ka dhan ah Apple's AR
Mark Zuckerberg si dhakhso leh uma bixin doono, kooxda Oculus waxay ka shaqeyneysaa sameynta aalado VR taxane ah for 200.
Si fudud u duub wada sheekaysiga taleefanka iphone qalabkan
Markay tahay duubista wada sheekaysiga taleefoonka ee aan ku samayno iphone-keena, sida kaliya ee maanta loo sameeyo waa ...
Dalxiiska 'Tour de France' waxaa ka buuxa silica iyo shucuurta, sidaa darteed ha moogaanin fursadda ah inaad ka warqabto wax kasta oo ka dhaca wareega gala
Ma jeceshahay inaad dirto heeso ama keydiso kuwa laga helo WhatsApp? Aaway maqalkii WhatsApp ee ku xirnaa iPhone? Hagaag soo gal oo wax walba ogow!
Bose SoundSport sameecadaha dhagaha, oo ku habboon jimicsiga
Bose wuxuu ku tartamayaa samaacadaha isboortiga qaabka 'SoundSport', oo ay ku jiraan nooc kormeeraya garaaca wadnaha
Amazon waxay ka shaqeyneysaa Echo cusub si ay ula tartanto HomePod
Sida laga soo xigtay xanta badan, ragga Jeff Bezos waxay ka shaqeynayaan qalab si ay ugu istaagaan AppleP HomePod.
Ku dheji iPhone-ka qaabka DFU
Baro sida loo dhigo iPhone-ka qaabka DFU si loo soo celiyo ama haddii iPhone-kaaga la xiray oo uusan dhaafin shaashadda tufaaxa.
Fiidiyow cusub oo Apple Park ah ayaa laga arkay diyaaradda drone-ka xalka 4K
Bil kasta waxaan haynaa warar ku saabsan horumarka shaqooyinka Apple Park ee Cupertino iyo fiidiyowgan cusub ...
EFF waxay hoos u dhigeysaa dhibcaha Apple
EFF waxay ku qiimeysay shirkadda Apple afar dhibcood oo ka mid ah shanta suurtagal ee daraasaddooda sanadlaha ah ee loo yaqaan "Yaa ku haya dhabarkaaga?"
Waxaan kuu sheegeynaa sida loo soo celiyo iPhone-ka iyo tillaabooyinka la raacayo si loogu qaabeeyo iPhone-ka iTunes ama iTunes la'aan si looga tago warshadda.
Mophie Juice Pack Air RED kiiska loogu talagalay iPhone 7 Plus oo leh raxan!
Madaxbanaanida aaladaha mobilada waa ciribtooda Achilles, haddana taariikhaha ayaa soo dhowaanaya markii ...
Ma isticmaashaa HomeKit? Hadda Apple wuxuu ku tusayaa sida ay ugu shaqeyso Apple Store
Qodobka muhiimka ah ee Apple u dabaaldegay 2014 intii lagu jiray WWDC, HomeKit ayaa la bilaabay. Waqtigaas waxaan ku jirnay ...
Ogeysiisyada "u beddelashada iPhone" ayaa hadda laga heli karaa kanaalka Apple Spain
Si tartiib tartiib ah dhammaan ogeysiisyada Apple waxay u imaanayaan kanaalka YouTube ee uu ku leeyahay Isbaanishka iyo ...
Heshiisyada ugu wanaagsan ee Amazon Prime Day waxay ku saabsan yihiin qalabka Apple
Waxaan kuu soo aruurineynaa dalabyada ugu fiican ee la heli karo ee loogu talagalay alaabada Apple maalinta Amazon Prime Day si aad u hesho wixii aad sugeysay muddo dheer
Wax walba oo laga ogaanayo ku saabsan wadaagista shaashadda oo ku dul wareeji macruufka 11
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si loo caddeeyo shakigaaga ku saabsan noocyada cusub ee Slide Over iyo Shared Shared (view split) ee cusub ee iOS 11.
Soo ogow sida loogu soo dejiyo fiidiyowyada Facebook-ga iPhone-ka iyo abka aad u isticmaali karto si aad u hesho fiidiyowyo. Waxba yaanu kaa hor istaagin inaad soo degsato fiidiyowyada Facebook
Mini DayZ ciyaar badbaado u ah iPhone-kaaga
Maanta waxaan kuu soo qaadaneynaa dareenkeenii ugu horreeyay ee Mini DayZ, ciyaar ay tahay inaad isku daydo oo aad u madadaalo badan.
Yurub waxay rabtaa inay qaadato 'qaabka' iFixit 'ee dhibcaha dib loo hagaajin karo
Yurub waxay ku aragtay reef qiimeynta dayactirka iFixit waxayna tixgelin siineysaa inay qaabkan u adeegsato macaamiisha Yurub.
Maxaan sameynaa haddii iPhone-keena si lama filaan ah u xirmo
Kuwani waa tillaabooyinka la raacayo haddii iPhone-ku iska dansado kaligiis iyo inaad isku daydo ka hor intaadan u adeegin. Muxuu taleefankayga si kedis ah u damiyaa?
Apple waxay diyaarineysaa seddex nooc oo cusub oo iPhone ah oo leh shaashadda OLED sanadka 2018
Apple ayaa suuqa ka bilaabi doonta seddex nooc oo moobiil cusub ah sanadka 2018, kuwaas oo lagu rakibayo albaabada OLED. Waxay macnaheedu noqon kartaa in la jeexo LCD.
Talooyin si looga fogaado inaad yeelato shaashad moobil jabtay
Beddelida shaashadda iPhone ee jaban ayaa qaali ah, sidaa darteed waxa ugu wanaagsan ee aan sameyn karno ayaa ah inaan raacno talooyinkan si aan uga fogaanno.
2017 moodooyinka iPhone ma lahaan doonaan Aqoonsi Taabasho
Moodooyinka cusub ee iPhone-ka ee la sii daayay sanadka 2017 ma lahaan doonaan nidaamka Aqoonsiga Taabashada. Tan waxaa sheegay falanqeeye caan ah oo sidoo kale horumariya faahfaahinta kale.
N26 wuxuu ku dhawaaqayaa hirgelinta Apple Pay ee Spain dhamaadka sanadka
Hagaag, waxaan horeyba uheynay war kale oo wanaagsan Khamiistaan, 6-da Luulyo, taasina waa in bangi kale uu ...
One Drop, waa gargaar aad u fiican oo lagu xakameeyo sonkorowgaaga
One Drop wuxuu isku daraa mitirka gulukooska iyo codsi ku saabsan iPhone-kaaga iyo adeeg khabiir ah oo kaa caawinaya inaad si fiican u xakameyso sonkorowgaaga
Faahfaahin Daanyeer, ciyaar kale oo guul leh oo fiidiyoow ah oo ku taal App Store
Xadhigga Daanyeerka, ciyaar mowduuc fudud iyo maarayn caan ah oo awood u yeelan doonta inuu kaa ilaaliyo shaashadda iPhone-kaaga muddo dheer.
Samsung waxay dhisaysaa warshadda ugu weyn adduunka ee lagu soo bandhigo OLED
In kasta oo Apple aysan caddeyn inay sii waddo ku tiirsanaanta Samsung oo keliya, haddana waxay abuuri lahaayeen warshad cusub oo ka kooban OLED.
Waxaan falanqeyneynaa Sonos Play: 3 ku hadla, tayada ma ahan mid aan la jaan qaadi karin cabirka
Waxaan falanqeyneynaa Sonos Play: 3, afhayeenka WiFi oo leh tayo cod leh oo ka sarreysa inta ka hartay moodellada ku jira qaybteeda iyo suurtagalnimada in lagu daro hadlayaal badan
Apple ayaa dhimaysa qiimaha iPhone, iPad iyo Mac 7,5% gudaha Hindiya
Apple waxay hoos udhigtay qiimaha terminals-ka Hindiya 7,5% taas oo ay ugu wacan tahay dhimista canshuurta alaabada iyo adeegyada dalka.
Sida loo tirtiro barnaamijyada loona keydiyo booska iPhone-gaaga ama iPad-kaaga
Haddii aad rabto inaad keydiso booska kaydinta ee iPhone-kaaga iyo iPasd, maanta waxaan kuu sheegeynaa dhowr habab oo aad ku tirtirto codsiyada aadan mar dambe isticmaalin
Détour, waa 10 daqiiqo oo gaaban oo filim ah oo laga duubay iphone
Kanaalka Apple Spain waxaan ku arki karnaa gaaban oo lagu duubay iphone oo cinwaankiisu yahay Détour. Sharaxaadda ...
Shirkadda Totallee ayaa soo saartay kiiska ugu yar ee maqaarka ee loogu talagalay iPhone
Waxaan falanqeyneynaa kiiska caatada ah ee maqaarka Totallee kaasoo sheeganaya inuu yahay kiiska ugu maqaarka ugu khafiifsan suuqa, kaas oo adigu adigu yeelan karto adiga oo kaqeyb galaya tartankan
Apple ayaa cusbooneysiisa bogga taageerada waxayna keentaa warar
Websaydhka taageerada ayaa la cusbooneysiiyey, cusbooneysiinta naqshadeynta guud ahaan, laakiin ugu muhiimsan, ku darista shaqooyin horay loogala noqday.
Laga soo bilaabo iPhone-kii asalka ahaa ee loo malaynayay iPhone 8. Dhamaan wada fiidiyowga si loo arko horumarkiisa
Ku sii wadida waqtiga laga soo gudbay tan iyo markii la bilaabay, Apple iPhone wuxuu leeyahay sanad horumarineed oo cajiib ah ...
Ku raaxayso Sky si ay u duulaan ciyaaraha markabka, bilaash wakhti xadidan
Saaxiibkey José wuxuu daabacay maqaal saacado yar kahor kaasoo uu ku tusay ciyaaro iyo codsiyo kala duwan oo ...
Emmanuel Macron, ayaa la galay labadiisa iphone sawirka rasmiga ah
Tani waa wax aan badanaa la arkin ama aan horumarin karno oo aan waligeed lagu arag ...
Waqtigan xaadirka ah iPhone horey ayaan u falanqeynay qaar ka mid ah wax soo saarka shirkadan waxaana dhihi karnaa inay hayaan waddo ...
Toogashadii ugu dambeysay ee ololaha iPhone waxaa lagu magacaabaa Sawirka Kanada
Ragga ka socda Cupertino waxay sii daayeen fiidiyow cusub oo ah Shot on iPhone saga, oo ah xayeysiin loogu talagalay oo keliya Kanada, maaddaama halkaas lagu soo saaray.
Burush-boodhadhka iPhone-ka mustaqbalka ee gacanta LG Innotek
Waxaan maalinba maalin la dagaallameynaa wararka xanta ah ee iPhone 8 ama iPhone 10 guuradii waxaana horeyba u aragnay ...
Sida loo arko oo loola wadaago liiska muusikada ee Apple Music asxaabtaada
Imaatinka macruufka 11 (oo hadda sidoo kale laga heli karo nooca beta-ka dadweynaha), adeegga muusigga ee qulqulaya Apple ...
Sida loo rakibo iOS 11 Public Beta 1 on your iPhone ama iPad
Soo ogow sida loo rakibo iOS 11 Dadweynaha Beta ee ku saabsan iPhone ama iPad ka dib markii la bilaabay nooca ugu horreeya ee Beta ee iOS 11.
Buug-gacmeedka Virgin Mobile wuxuu ka kooban yahay keliya iPhone
Dhamaanteen soo aragnay muhiimada ay Apple ku soo bandhigeyso moodooyinka cusub ee iPhone, waxaan awoodnay inaan xaqiijino ...
Instagram waxay tijaabisaa hab ay kula wadaagaan sawirada kaliya asxaabtaada ugu fiican
Instagram waxay tijaabineysaa qaab cusub oo loogu wadaago sawirada iyo sheekooyinka kaliya xul xulaf ah oo asxaab ah ama kuwa raacsan.
Google ayaa ku dhawaaqday inay joojinayso dhuumaaleysiga e-mayllada adeegsadayaasha iyadoo ujeedadu tahay inay siiso xayeysiin shaqsiyeed.
Repsol waxay aqbashaa casuumaada Cepsa waxayna si buuxda u gasho suuqa lacagaha mobilada iyadoo la socota codsigeeda cusub ee Waylet
Foxconn waxay maanka ku haysaa 7 gobol oo Mareykan ah in laga furo warshadii ugu horeysay dalka
Qorshayaasha Foxconn ee ah inay wax soo saarkooda ka bilaabaan dalka Mareykanka ayaa wali socda waxaana xilligan la joogo, kaliya 7 gobal ayaa leh codbixinta isku aadka.
Sida loo rakibo iOS 2 beta 11 si bilaash ah iyada oo aan la helin koontada horumariyaha
Haddii aad u dhimaneyso inaad tijaabiso warka ku saabsan iOS 11 beta 2, maanta waxaan kuu sheegeynaa sida loogu rakibo iPhone ama iPad bilaash adigoon noqon horumariye
Laba fiidiyow oo cusub oo Apple ah oo ku jira xusuusta ayaa ka muuqda
Marka lagu daro ku darida wararka iyo u ogolaanshaha dadka isticmaala inay raadiyaan xoogaa nolol ah si ay uga shaqeeyaan ...
Teknolojiyada khiyaaliga ahi waxay dhigtaa calaamada Iibinta
Sameeyaha processor-ka iPhone iyo iPad-ka ayaa soo dhejiyay calaamadda iibka.
Apple Watch waxay diyaarineysaa kacaan weyn oo loogu talagalay dadka qaba cudurka macaanka
Sida laga soo xigtay agaasimaha guud ee shirkadda Dexcom, Apple Watch wuxuu isbeddel ku samayn karaa nolol maalmeedka dadka cudurka macaanka qaba dhowaan isagoo adeegsanaya nidaamyo cabbiraad oo cusub.
Sidee loo wareejiyaa fiidiyoowga? Waxaan kuu sheegeynaa sida aad uga beddeli karto jiheynteeda iPhone ama iPad xulashada arjiyada ee aadan seegi karin.
Philips wuxuu ku fidiyaa Hue kala duwan qaabka E12
Noocyada nalalka Hue ayaa hadda sii ballaariyay buugga leh qaabka E12, guluub loogu talagalay nalalka yaryar iyo kuwa qurxinta.
Jiilka labaad ee Ring Video Doorbell wuxuu na siiyaa xalka 1080p iyo batteriga la is weydaarsan karo
Jiilka labaad ee Video Doorbell wuxuu na siinayaa xallinta kamarad sare marka lagu daro batariga la is-weydaarsado.
Pioneer wuxuu soo bandhigayaa Afhayeenka Hillaaca Kowaad Isku xidhka
Shirkadda reer Japan ee Pionner ayaa hadda iibisay sameecadihii ugu horreeyay ee hillaaca ee iPhone, sameecad aan lahayn batteri kuna xirta dekedda iPhone.
Buugga "Hal Qalab" ayaa maanta la iibinayaa inkasta oo muran ka taagan yahay
Buugga Brian 'Hal Qalab: Taariikhda Sirta ah ee iPhone' ayaa horay loogu iibiyay Amazon ...
Shirkada 'Theings firm' ayaa ugu dambeyn lagu daray Nokia
Laga bilaabo xilligan, dhammaan wax soo saarka shirkadda Withings waxaa loo beddelay Nokia, ka dib markii ay dhammaystireen hawshii iibsiga
Soo saaraha qalabku wuxuu xaqiijinayaa in iPhone-ka cusub la magacaabi doono: Tobaneeyo Daabac
Dhamaan wararka xanta ah waxay soo jeedinayaan in Apple ay bilaabi doonto iPhone si loo xuso sanadguuradii tobnaad, soo saaraha ayaa tilmaamay in loogu yeeri doono tobaneeyo sano.
Sida loogu ciyaaro PlayStation 4-ka iPad-kaaga adigoo u mahadcelinaya R-Play
Casharrada iPhone News casharrada maanta waxaan si fudud kuugu sheegi doonnaa sida aan ugu ciyaari karno PlayStation 4 iPad-kaaga adigoo u mahadcelinaya R-Play.
Waxaan u badali karnaa Siri kaaliyaha Google sida ku xusan xanta macno darada ah
Maxaad u malayn lahayd haddii Apple kuu oggolaato inaad ku beddelato Siri kaaliyaha Google mustaqbalka iPhone? Waxaan qiyaaseynaa inay adiga kuguula muuqato mid aan macquul ahayn sida ay annagaba nala mid tahay.
Qalabka buulku wuxuu la jaan qaadi karaa HomeKit
Waqtigan xaadirka ah suuqa waxaan ka heli karnaa qalab aad u tiro badan oo la jaan qaadi kara borotokoolka isgaarsiinta ee 'AppleK'.
Akhristaha faraha faraha shaashadda hoostiisa ayaa durbaba shaqeynaya, laakiin ma ahan iPhone ee bilaabaya
Vivo, wuxuu mas'uul ka ahaa inuu muujiyo marka hore in akhristaha faraha ee shaashada ka hooseysa uu shaqeynayo ...
Apple waxay sii wadaa kordhinta shaqaalaynta saynisyahanada caafimaadka
Apple Watch waxay cadeyneysaa inay tahay seef laba afle ah oo loogu talagalay cilmi baarista caafimaadka, waana sababta Apple ay u shaqaaleysiiso shaqaale badan.
Te One Device: Buugga inoo sheegi doona taariikhda qarsoon ee iPhone-ka
The One Device waa buug ujeedadiisu tahay inuu sheego sheekada sirta ah ee ka dambeysa abuuritaanka iPhone-ka, wax kasta oo aadan aqoon illaa iyo hadda, ay soo dhowdahay.
Waxaan ku tijaabinay safarka Zecti mini tripod
Markii aan dooneyno inaan duubis ka dhigno mid xirfad leh intii suurtagal ah, iyadoo xoogaa digniin ah, xaaqid ama sawirro taabanaya xuduudaha qaarkood si toos ah ...
Logitech wuxuu soo bandhigayaa kamarada amniga wareegga 2 oo la jaan qaadi kara HomeKit
Waxaan wajaheynaa wax soo saar cusub oo ka yimid sumcadda caanka ah ee loo yaqaan 'Logitech' kiiskanna waa dib u eegis ku saabsan kamaraddaada ...
Sida ugu fudud ee loo tirtiro akoonkeena Facebook
Waxaan ku tusineynaa sida si joogto ah loo tirtiro akoonka Facebook. Gali haddii aad rabto inaad tirtirto astaantaada shabakaddan bulshada ama aad rabto inaad ogaato sida loo sameeyo.
Sida loo sawiro dukumiintiyada kujira iOS 11 barnaamijka "Notes"
Waad ku mahadsan tahay hawsha cusub ee codsiga Notes-ka ee leh iOS 11, waxaan si toos ah u baari karnaa dukumiintiyada iyada oo aan la adeegsan codsiyada dhinac saddexaad.
Apple ayaa bishaan ka furaysa dukaan cusub oo Apple ah Taiwan
Waxaan sii wadaynaa dukaamada cusub ee Apple ee adduunka oo dhan xaaladdan oo kale waa markii ...
Tani waa sida ay u shaqeyso Drag & Drop, oo waliba gaadhay iPhone
Apple waxay muujisay waxqabadka Drag & Drop ee iPad-ka, laakiin waxaan ogaanay in bedelkan cusubi uu ka shaqeynayo iPhone sidoo kale.
IOS 11 waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku dhejiso kantaroolka taabashada AirPod-yadaada, waxayna ka shaqeeyaan iOS 10
IOS 11 waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku darto kantaroolka taabashada AirPods si madax-bannaan madax-madax-madaxeed kasta, waxayna la shaqeysaa macruufka 10. Waxaan sharxeynaa sida.
IOS 11 waxaan si toos ah ugajawaabi karnaa wicitaanada dhowr ilbiriqsiyo kadib
Si tartiib tartiib ah oo ay horumariyayaashu u baarayaan waxa ka socda iyo wixii ka baxa iOS 11, Actualidad iPhone ayaan kugu wargalinaynaa ...
Ma taqaanaa sida loo duubo shaashaddaada iPhone? Waxaan kuu sharraxeynaa dhammaan hababka jira si loo gaaro: iyada oo loo marayo WiFi, fiilooyin, Windows, Mac, laga bilaabo iOS 11 ...
OnePlus 5 wuxuu cadeynayaa nuqulka ugu dambeeya ee naqshadeynta iPhone 7
OnePlus 5 ayaa u yimid inuu na tuso mar kale in Apple wali yahay tixraaca cad ee naqshadeynta iyo adeegga.
Apple waxay ku darsatay qalab cusub oo loogu talagalay Mac iyo iPad Pro cusub boggooda
Dib-u-habeynta Apple Store ayaa sidoo kale noo keentay qalab cusub oo Mac ah sida 'Key Keyboard' oo leh nambarro nambar ah.
Sida loo adeegsado iCloud Keychain on iPhone
Waxaan kuu sharaxeynaa sida loo qaabeeyo iCloud Keychain, sida ay u shaqeyso, xogta ay keydiso iyo wax walboo aad u baahan tahay si aad uga faa iideysato
NFC ee Apple ayaa heli doona horumariyeyaasha
Apple waxeey NFS ka hirgalineysay iPhone-keeda in mudo ah laakiin ma aysan aheyn ilaa hada markii ay soo saareyaasha dalabyada ...
Soo koobista muuqaalka ee muxaadaradii shalay 15 daqiiqo
Caadi ahaan furayaasha Apple waa kuwo ballaaran oo kiisaska sida WWDC ay u muuqdaan inay aad uga dheer yihiin ...
DriveTribe, waa shabakad bulsheed loogu talagalay baabuurta jecel
DriveTribe waxaa loo soo bandhigay qof walba inuu yahay shabakad bulsheed oo dhammaan kuwa jecel tartanka mootooyinka ay sugayeen sannado iyo sannado
Christie ayaa xaraashay Apple I loo habeeyay bishan
Markii aan ka hadlayno kumbuyuutarrada Apple iyo gaar ahaan moodooyinka "guridda", waa wax aan suurtagal ahayn in aan dib loo eegin ...
Barnaamijka TV-ga wuxuu ka muuqdaa dalal kale oo horudhac u ah WWDC
Dhowr saacadood ka dib bilowgii WWDC, arjiga TV-ga wuxuu ka muuqanayaa boodhka qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ka socda Australia, Boqortooyada Ingiriiska iyo New Zealand.
Ku hagaaji waxqabadka iPhone-gaaga tabahaan fudud
Sabti wanaagsan! Nidaamka hawlgalka ee iPhone, iOS, maahan nidaam u janjeera inuu ka sii daro waxqabadkiisa wax badan ...
Abaabulka shaqadaada kooxeed waligeed kama fududaan kahor imaatinka Qorsheeye, kaasoo doonaya inuu hor istaago waxyaabaha kale ee lagu beddelo sida Slack.
Sida loo soo dhoofiyo xiriirada iPhone
Waxaan kuu sheegeynaa sida looga soo dhoofsado xiriirada iPhone ka Gmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Windows, iTunes iyo inbadan. Wareejinta jadwalkaaga iPhone si fudud
Sida loo dhageysto muusikada Apple Watch
Waxaan kuu sharaxeynaa sida aad muusikada ugu dhageysan karto Apple Watch-kaaga, sida loogu wareejiyo muusikada Apple Watch iyo dhagaha dhagaha ee aad isticmaali karto
Elgato Eve Degree, dareeraha heerkulka iyo huurka ee HomeKit
Elgato Eve Degree waa shiddo cusub oo ku habboon gurigaKit iyo heerkulka huurka oo lagu daray kaydka ballaaran ee sumadda ee otomatiga guriga ee gurigaaga
Afhayeenka Apple wuxuu horey u ahaan lahaa wax soo saar sida uu sheegayo Bloomberg
Hadalka Apple ee caqliga leh ee leh Siri isku dhafan ayaa horeyba u bilaabi lahaa soo saarkeeda si loogu soo bandhigo Keynote soo socda ee WWDC 2017
Sida loo dhaweyd sawirada iOS-ka oo aan lahayn JAILBREAK
Markaad sawiro qaadanaysid, had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaad kudhowaad mowduuca sida ugu macquulsan si looga fogaado inaad sameyso zoom digital ...
Nest Cam IQ ayaa aqoonsan qofka gurigaaga soo galaya
Nest hadda waxay soo bandhigtay kamarad amniga gudaha ah oo ay ku jiraan qaar ka mid ah astaamaha aad u fiican sida aqoonsiga wajiga ...
MOBAG waxay soo cusbooneysiisay fikradda boorsada, tani waa waaya aragnimada aan ku leenahay [DIB U EEGID]
Kooxda MOBAG waxay tixgelisay dhammaan dhibaatooyinkaas ka soo baxa baahida loo qabo in lala socdo qalabkeenna oo aad ugu dhow.
Apple waxay soo saareysaa seddex xayeysiis oo cusub si ay ula macaamilaan dadka isticmaala Android
Ragga ka socda Cupertino waxay dib u soo dhejiyeen fiidiyowyo cusub si ay ugu dhiirrigeliyaan mid fudud, kaas oo ah in laga beddelo Android illaa iOS.
Waxaan udhaxeyneynaa saldhigga istaaga safarka ee Moshi ee Apple Watch-kaaga
Moshi wuxuu na siinayaa saldhig aad u fiican oo isku laaban oo isku-laaban oo loogu talagalay Apple Watch, oo ku habboon safaradayada, taasna adiga ayaa ku lahaan kara bixintaas.
Sida loo Dhoofinta Xiriirada ka iPhone
Waxaan kuu sharxeynaa sida looga dhoofiyo xiriirada iPhone-gaaga adeegyo kale (gmail, iCloud ...) iyo aalado kale (Android, Windows, Mac) Tilmaamaha ugu dhameystiran!
Isbarbardhigga u dhexeeya kamaradda iPhone 7 Plus iyo Galaxy S8
IPhone 7 Plus waa taleefanka kamaradda ugu fiican ee Apple, laakiin lama tartami karo Galaxy S8 oo loo siman yahay
Waa maxay iyo sidee ayuu liiska rabitaanku uga shaqeeyaa iOS?
Waxaan ku tusineynaa wax kasta oo aan ku sameyn karno liiska rabitaanka macruufka iyo waxa adeegsigiisa dhabta ah yahay
Tijaabada Adkaysiga IPhone 2G
Terminaalkii ugu dambeeyay ee Apple ee soo maray gacmaha taleefannada casriga ah ayaa ahaa iPhone 2G, iPhone-kii ugu horreeyay ee suuqa ku jira.
Donald Trump barnaamijka kaliya ee uu adeegsado ee iPhone-ka waa Twitter
Donald Trump taleefanka cusub ee iPhone-ka ayaa leh hal codsi oo keliya oo la rakibay, mana aha wax kale oo aan ahayn shabakadda bulshada ee uu aadka u jecel yahay: Twitter
Apple waxay diyaarisaa jab cusub oo loogu tala galay Sirdoonka Artifishalka
Apple waxay diyaarin laheyd microchip si ay u qabato howlo la xiriira sirdoonka farsamada oo markaa soo degsato processor-ka ugu weyn
Klocki: barnaamijka cusub ee usbuuca ee App Store
App Store wuxuu go'aansaday inuu Klocki u dhigo barnaamijka usbuuca. Ciyaar u taagan muusigeeda iyo waxqabadkeeda.
Bose Revolve and Revolve +: dhawaqa hareeraha banaanka
Bose waxay noo soo bandhigaysaa Revolve iyo Revolve + ku hadlayaal la qaadi karo oo leh 360º dhawaq iyo biyo diidmo ku habboon banaanka
Apple waxay xareysaa patent si ay ugu adeegsato qalinka Apple-ga iPhone-ka
Patent-kii ugu dambeeyay ee Apple heshay wuxuu na tusayaa suurtagalnimada adeegsiga qalinka Apple oo wata iPhone-ka marka lagu daro iPod-ka.
Apple waxay sii deyneysaa qalab cusub oo loogu talagalay AirPods
Apple ayaa hadda soo saartay cusbooneysiin cusub oo qalabka AirPods ah, taas oo hagaajinaysa waxqabadka iyo waxqabadka dhegaha Apple.
Garmin wuxuu ku dhawaaqay "VIRB 360," kamarad ku habboon iphone oo duubeysa fiidiyowga illaa 5,7K
Garmin wuxuu ku dhawaaqay VIRB360, is haysta, kamarad 360-aan biyuhu la socon karin lehna 5,7K / 30fps qaraar iyo 4K xasillooni goobeed
DJI Spark, DJI waa sharad weyn oo lagu jabinayo suuqa diyaaradaha aan duuliyaha laheyn
DJI waxay u diyaar garoobeysaa inay jabiso suuqa diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyagoo bilaabaya DJI Spark, oo ah diyaaradeeda ugu jaban ee tikniyoolajiyad casri ah.
Fiidiyow ayaa muujinaya waxa uu noqon karo iPhone 8 cusub
Falanqeeye xanta ayaa soo dhigay fiidiyoow bartiisa Twitter-ka oo muujinaya nooc ka mid ah iPhone 8 oo u dhigma wararkii ugu dambeeyay ee la daabacay.
Waxaan tijaabinay Noontec's Zoro II sameecadaha dhagaha la '
Waxaan wajaheynaa kacdoon dhab ah oo sameecadaha sameecadaha leh inkasta oo ay run tahay in kuwani ay jireen in muddo ah, ...
Sida loo Nadiifiyo Taariikhda Raadinta Tooska ah ee iPhone
Joojinta taariikhda raadinta waa nidaam aad u fudud oo baabi'in doona raad kasta oo raadinta aan ku sameynay iPhone-ka.
Apple-ka Lexus RX450h SUV oo ku qalabaysan dareemayaal badan iyo kaamirooyin ayaa markale la arkay
Goor aan fogeyn ayay ahayd markii gaariga Apple-ka ah ee iskiis u kaxeeya lagu qabtay gacanka San Francisco, markan ...
Ogeysiiskii ugu dambeeyay ee Beats wuxuu na tusayaa tirooyinka ugu muhiimsan ee NBA
Ragga ka socda Apple waxay xayeysiin cusub ka bilaabeen Mareykanka halkaas oo aan ku arki karno xiddigaha ugu badan ee matalaya NBA Beats.
Dash Pro wuxuu dhaafsiisan yahay AirPods
Bragi waxay soo bandhigtay samaacado cusub oo wireless ah, Dash Pro, oo la jaanqaadaya codsiyada kooxda saddexaad iyo kormeerka jirka
Apple waxay soo kordhisay 4 casharro cusub si ay noogu baraan sida loo isticmaalo kamaradda iPhone 7
Apple waxay sii waddaa inay ku darto fiidiyowyo ku jira sida loo toogto iPhone 7 ololaha si aan u baranno sida loo isticmaalo kamaradda iPhones-ka.
Google ayaa ka takhalusi doonta Emojis-dixiriga qaabeeya ee 'Android O'
Xaaladani waxay socotaa in kabadan seddex sano waxayna umuuqataa inay ugu dambeyn doorteen inay Emojis siiyaan muuqaal macquul ah.
Sida lacag loogu bixiyo moobilkaaga adoo adeegsanaya Telegram
Telegram waxay ku dartay hawl lacag bixinta mobilada oo kuu ogolaanaysa inaad isticmaasho kaar amaah ah ama Apple Pay si aad u iibsato alaab
D-Link Omna 180 HD, oo ah kamarad ilaalinaysa HomeKit
Kaamirada D-Link Omna 180 HD waa mid kamida kamaradaha guryaha ee ugu horeeya ee HomeKit lasocda oo leh duubis Full HD ah iyo xagal 180º ah.
Amazon waxay hoos u dhigtaa kiniinigeeda si ay isugu daydo inay suuqa ka soo kabato
Hadda isagaa iska leh inuu hoos u dhigo qiimaha labadiisa kiniin ee ugu caansan, Kindle Fire HD8 iyo Fire 7.
Codsiga farriinta calaamadaha ayaa gaaraya Senate-ka Mareykanka Mareykanka
Saxiix, codsi ay doorteen Golaha Guurtida ee Mareykanka si ay xubnahooda sharafta leh "aamusnaan" ugu sheekeystaan ​​iyagoon ka baqayn in la basaaso.
Apple wuxuu sii daayay 7 Fiidiyow oo cusub oo ku saabsan Helitaanka Qalabkaaga
Apple wuxuu sii wadaa inuu sii daayo fiidiyoowyo faro badan oo wanaagsan oo ku saabsan wax soo saarkiisa markanna wuxuu si toos ah ugu tixraacayaa mid ...
Sida looga hortago wicitaanada nambarada taleefanada